बेलायतमा कोरोनाले उप्काएका पूर्व गोर्खाका व्यथा
Posted on May 13, 2020 May 13, 2020 by J NP
लन्डन, ३१ वैशाख।पोखरा मुस्ताङ चोकको घर सिन्कीको भाउमा बेचेर सन् २०१२ मा बेलायत पस्नुभएकी ६७ वर्षीया कान्छीमाया पुन आठ वर्ष लन्डनको नर्थहोल्टमा बस्नुभयो । केही वर्षअघि श्रीमान् गुमाएकी पुनको बुढेसकालको सहारा सन्तान सबै नेपालमै छन् । उहाँले यहाँ भोगेका दिनहरु निकै कठिन छन् । अस्पताल जानुप¥यो भाषाको समस्या । दोभाषे पनि सधैँ नपाइने । अस्पताल जान कुन बस चढ्नुपर्ने हो भन्ने मेसो आफैँले नपाउने । लन्डनको व्यस्त जीवनमा सामान्य कामका लागि पनि कति दिन कोसँग सहयोग मागिरहनु ? यही हैरानी सहन गाह्रो भएर दुई महिनाअघि उहाँले सधैँका लागि नेपाल जाने निधो गर्नुभयो । साथीभाइको सहाराले यहाँको अध्यागमन कार्यालयमा निवेदन दिनुभयो । स्वेच्छाले स्वदेश फर्किन चाहनेहरूका लागि यहाँको अध्यागमन विभागमा ‘भोल्युन्टरिली रिटर्न सर्भिस’ सञ्चालनमा छ । सोही कार्यक्रमको सहायताले उहाँ नेपाल फर्किनुभयो ।
यसमा रहेका केही मापदण्ड पूरा भएपछि स्वदेश पठाइने व्यवस्था छ । नेपाल जान जहाजको टिकट निःशुल्क दिन्छ भन्ने सुनेर निवेदन दिएकी कान्छिमाया बेलायतमा बन्दाबन्दी हुनुभन्दा एक हप्ताअघिमात्र घर पुग्नुभयो । पहिले सधैँ “म यहाँ म’रेँ भने पनि लाश बुझ्ने मानिस कोही छैनन्”, भनिरहने कान्छीमाया आ’त्तिएर नेपाल फर्किनुभयो । अहिले भन्नहुन्छ, “अहिले कोरोनाको यो समस्याका बेला बेलायतमै भएको भए मन कति आत्तिन्थ्यो होला, अहिले घर आइपुगेँ, परिवारको साथमा छु, ढुक्क भएको छ ।”
आँखा केही कमजोर भएर अस्पताल पुगेका आफ्नो श्रीमान्को आँखाको शल्यक्रियाले झन पूरै नदेख्ने भएपछि उहाँलाई स्वास्थ्य चौकी लाने ल्याउने गरिरहेकी धनमाया पुनको बेलाबेलामा आफ्नै ज्यान पनि भारी भएर आउँछ । श्रीमान्लाई पटक पटक विभिन्न स्वास्थ्य चौकी डो¥याउँदै गर्दा नेपालमा भएका सन्तानको याद निकै आउने गरेको बताउनुहुन्छ धनमाया पाइजा । उहाँले पनि लन्डनको जीवन निकै गा’ह्रो गरी का’टिरहनुभएको छ । विदेशको बसाइँ क’ष्टकर छ भन्ने यथार्थका अनगिन्ती उदाहरण छन् उहाँसँग । गा’ह्रो भए पनि घर फर्किन भने नसकेको उहाँले समय समयमा सुनाउनुहुन्छ ।
कान्छीमाया र धनमायाका जस्ता व्यथा बेलायतका गल्ली गल्लीमा बग्रेल्ती भेटिन्छन् । नेपालमै बसेर सोचेजस्तो सजिलो छैन पूर्वगोर्खाको बेलायतको बसाइँ । भूपू गोर्खाका पिरमर्का त अनगिन्ती नै छन्, ती व्य’थाहरु अहिले कोरोनाका बेला उप्किएका छन्, बाहिरै निस्किएका छन् । वर्षौंदेखि पिर बोकेर बेलायत बसेका उनीहरुका व्य’था कोरोनाले अझ बढी उप्काइदिएको जस्तो देखिँदैछ । दिनभरजसो यहाँका सार्वजनिक पार्कको बसाइँ अनि बिहान बेलुका कोठामा । अधिकांशको कोठाको बसाइँ पनि एक्लै या वृद्धवृद्धामात्र जस्तो देखिन्छ । लन्डनमा यसरी नै चलिरहेको छ उनीहरुको जीवन । यतिखेर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बेलायतमा निकै बढ्दोरुपमा देखिन्छ । यससँगै यहाँका नागरिकजस्तै नेपाली पनि सङ्क्रमित भइरहेका छन् र केहीको मृत्यु पनि भएको छ । यहाँ कारोनाले ज्यान जानेमा धेरै त पूर्वगोर्खा नै छन् । अनि मानिसहरु प्रश्न गर्ने गर्छन्, बेलायतमा पूर्वगोर्खा किन यसरी कोरोनाको शिकार भइरहेका छन् ?
लन्डनस्थित बेलायतका लागि नेपाली दूतावासका अनुसार महामारीले बेलायतमा हालसम्म ६० जनाको ज्यान गइसकेको छ । यसरी ज्यान जानेमा ४९ जना त पूर्वगोर्खामात्र छन् । अन्य ११ जना गैरसैनिक नेपालीको मृत्यु भएको छ । त्यसमा पनि ५० जना पुरुष र १० जना महिला रहेका छन् । नेपाली समुदायभित्र यसरी एउटा वर्ग ठूलो मात्रामा यसरी विदेशी भूमिमा प्रभावित भएपछि यहाँका नेपालीमा चिन्ताको विषय बनेको छ । यो प्रभावलाई बुझेरै लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले यही वैशाख १५ गते यहाँको रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टमा पत्राचार गरेर भूपू गोर्खा समुदायको क्षतिप्रति ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो ।
यहाँको नेशनल हेल्थ सर्भिसेस् (एनएचएस) ले जारी गरेका स्वास्थसम्बन्धी बुलेटिन र अन्य प्रचार सामग्री अङ्ग्रेजी माध्यममा मात्रै पाउन सकिन्छ । यो भाषागत समस्या धेरैमध्येको एउटा प्रमुख कारक मानिन्छ । हुन त ग्रीनवीच बरो र सरमोर बरोमा नेपाली भाषामै स्वास्थ्य सामग्री पाइन्छन् । तर नेपाली धेरै ठाउँमा छरिएर रहेकाले सरकारले सबै ठाउँमा बस्ने नेपालीलाई सबै सामग्री नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन पनि सकिरहेको छैन । यसका लागि यहाँका केही व्यक्तिले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन खोजेका छन् । तर यहाँको हालको परिस्थितिका कारण सरकारले सकारात्मक लिएर केही गर्नसक्ने देखिए पनि नीतिगत रुपमा भने निश्चित जनसङ्ख्या र स्वास्थ्य विभागको अध्ययनबिना सम्भव छैन ।
पहिले सन् २०१० र सन् २०१३ मा अध्ययन गरेर दुई स्थानमा मात्र नेपाली भाषामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको थियो ।
अर्काे कुरा भूपू गोर्खाहरू जो यो महामारीमा मृत्यु भए उनीहरुमा अ’पवादबाहेक सबैले पहिलेदेखि नै कुनै न कुनै रोगको नियमित औषधि खाएको देखिन्छ । तीमध्ये केहीको मुटुको र अन्य भागको शल्यक्रिया गरिएको थियो । यसरी हेर्दा पहिलेदेखि नियमित औषधि सेवन गर्ने भूपू गोर्खा बढी रहेको देखिन्छ । केही दिनअघि बेलायतको एक समाचार संस्थाले दिएको समाचारअनुसार कोभिडका कारण हाल अस्पताल भर्ना गरिएका पाका उमेरका नागरिकमध्ये सात जनामा एकजनामात्र बाँच्ने गरेका छन् । यहाँका अस्पतालभित्र के भइरहेको छ बाहिर आउन सक्दैन । अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी सूचना उपलब्ध गराउन स्वतन्त्र छैनन् । यसरी मृत्यु हुने भूपू गोर्खामा कतिपयका छोराछोरी नेपालमै छन् । यहाँ वृद्धवृद्धा मात्रै बस्दै आएको देखिन्छ । उनीहरूमा हुने एक्लोपन र नेपालमा जस्तो एकापसमा घुलमिल हुने समय र वातावरणसमेत नभएका अधिकांशको बसाइँ कष्टकर देखिन्छ ।
बेलायत सरकारले हालैमात्र कोरोनाका कारण उच्च जो’खिममा पर्नसक्नेलाई घरमै पत्र पठाएर सतर्कता अ’पनाउन भनेको छ । तर अधिकांश पाको उमेर भएका र कुनै न कुनै पुरानो रोगको औषधि सेवन गरिरहेका भूपू गोर्खाका घरमा पत्र आयो वा आएन त्यस विषयमा खोजी गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ बिबिसी नेपाली सेवाका पूर्वसम्पादक भगिरथ योगी । उमेर धेरै भएका र पुरानो रोगका कारण नियमित औषधि लिइरहनेलाई घरमै बस्न र आवश्यक सतर्कता अ’पनाउन भने पनि हालसम्म बेलायतमा रहेका कति नेपालीले त्यो पत्र पाए भन्ने तथ्याङ्क यहाँ छैन । यस विषयमा न यहाँको गैरआवासीय नेपाली सङ्घले तथ्याङ्क लिएको छ र न त अन्य कुनै संस्थाले । यदि यो पत्र राख्न सकिएमात्र पनि उनीहरूलाई आवश्यक औषधि वा खाद्यान्न यहाँको सरकारकै स्थानीय निकायले घरमै पु¥याइदिन्थे । यसपछि बाँकीलाई यहाँस्थित नेपाली सङ्घसंस्थाले पनि केकस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने सजिलो हुने थियो । रासस
कुनै पनि हालतमा नेपाली भूमि छोड्न सकिन्न, बरु खनेको सडक भाडामा दिन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली